April 2021 – " कञ्चनजंगा News "
एमसीसीले जोड्न सक्छ काँग्रेस-माओवादीलाई !
No Comments on एमसीसीले जोड्न सक्छ काँग्रेस-माओवादीलाई !
एमाले इतर दलहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको विकल्प खोज्न थालेको कति भयो ? सर्वोच्चले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गरे देखिनै उनीहरू ओलीको बहिर्गमन पर्खिरहेका छन् । तर उनीहरूले न त अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सकेका छन् न त माओवादीले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ ।
माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिनुका पछाडि जे सुकै कारण भए पनि ओलीइतर सत्ता समीकरण बन्न नसक्नु नै मुख्य कारण हो । यसमा जनता समाजवादी पार्टीको रोल पनि महत्त्वपूर्ण छ । जसपाको एक पक्षले निरन्तर ओलीलाई साथ दिने बताइरहेको छ । माओवादीले ओलीको बहिर्गमनका लागि प्रयत्न गरे पनि काँग्रेस पनि खुलेर लागेको छैन ।
काँग्रेसले आधिकारिक रूपमा आफ्नो नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउन पहल गर्ने निर्णय गरे पनि यसले केही मुद्दामा सुनिश्चितता खोजेको देखिन्छ । त्यो हो एमसीसी । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री र ज्ञानेन्द्र कार्की अर्थमन्त्री रहेको बेला एमसीसी सम्झौता भएको थियो । एमसीसी जसरी पनि पास गर्नुपर्ने देउवाको अडान छ । त्यही कारण उनी ओलीसँग पनि नजिक छन् । माओवादीमा यसबारे प्रस्ट छैन । माओवादीका केही नेताले एमसीसी जस्ताको त्यस्तै पास गर्न नहुनेमा छन् । यही कारण माओवादीले सभामुखमार्फत दुई वर्षदेखि एमसीसी रोकेर राखेको छ ।
योपनि-सत्ता जोगाउन ‘एमसीसीको टेको’
माओवादीसँग सत्ता गठबन्धनका लागि देउवाले माओवादीलाई एमसीसी पास गराउने सुनिश्चितता खोजेका छन् । माओवादी र काँग्रेस एमसीसीका पक्षमा आए ओली यसअघि नै एमसीसी पास गर्नुपर्ने अडानमा छन् । उनले सभामुखले एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । एमसीसीकै कारण विपरीत वैचारिक धारका काँग्रेस र माओवादीबिच सत्ता गठबन्धनको प्रयास भइरहेको छ ।
एमसीसीका विषयमा समान धारणा बनाएर ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने कसरत काँग्रेसले थालेको छ । ओलीविरुद्धको सत्ता गठबन्धनका विषयमा छलफल चल्दा काँग्रेस सभापति देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार एमसीसी पास गर्ने पक्षमा रहेको र माओवादीले पनि त्यसमा समर्थन गर्नुपर्ने अडान राखेपछि सहमति हुन सकेको थिएन ।
जसरी पनि ओलीको बहिर्गमन खोजिरहेको माओवादी एमसीसीमा मध्यमार्गी बाटो अपनाएर भए पनि काँग्रेसलाई मनाउने मनस्थितिमा पुगेको छ । अविश्वास प्रस्ताव पास भएर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्ने बित्तिकै एमसीसीबारे संकल्प प्रस्ताव पास गर्ने गरी सहमतिको खाका तयार गर्ने तयारी काँग्रेस माओवादीले गरेका छन् । एमसीसीका कतिपय प्रावधान स्पष्ट पारेर सहमति गर्न सकिने वचन माओवादीले दिएको छ ।
काँग्रेस माओवादी गठबन्धन सत्ता समीकरणका लागि मात्रै होइन आगामी चुनावसम्मै कायम रहेन माओवादी नेताहरू बताउँछन् । एमसीसी अनुमोदन गराउने पक्षमा काँग्रेस पहिलेदेखि नै भएकाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बने पनि, नबने पनि त्यो विषय काँग्रेसको एजेन्डा बनिरहने काँग्रेस नेताहरूको भनाइ छ ।
यता जसपा पनि सत्ता गठबन्धनका विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने तयारीमा छ । एमसीसीका विषयमा जसपाका खासै विवाद छैन । तर, जसपाले काँग्रेस–माओवादीभन्दा ओलीलाई साथ दिने सम्भावना प्रबल छ । जसपाका संस्थापन महन्थ ठाकुर पक्ष निरन्तर ओलीलाई साथ दिन सकिने बताउँदै आएको छ । ठाकुरको जसपाका बहुमत रहेको पनि बताइन्छ ।
लामो समय सत्ता समीकरणका लागि कसरत गरेका काँग्रेस माओवादीलाई अन्ततः एमसीसीले जोड्ने देखिएको छ । यता ओली पनि एमसीसीलाई विषय बनाएर काँग्रेसको विश्वास जित्ने मनसायमा छन् । उनले केही दिनअघि भएको सर्वदलीय बैठकमा एमसीसी संसद्मा छलफलको विषय बनाइनुपर्ने बताएका थिए । जसमा काँग्रेसले पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएको थियो ।
यता माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने नयाँ सत्ता समीकरणका विषयमा एमसीसीलाई जोडेर कुनै सहमति नगरिएको बताएका छन् । उनले नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा एमसीसी परियोजनासँग सम्बन्धित कुनै सम्झौता नगरेको बताए ।
No Comments on आफैले जारि गरेको नियमलाइ सच्च्याउदै उपत्यकाकामा यी नियम लागु हुने, बनाइदिने भयो सहज ! अब के गर्न पाइन्छ के पाइदैन ?
No Comments on यी हुन् संसारकै धनी जुवाडे, जस्ले युवतीलाई पनि….
No Comments on २ दिन देखी ढुंगाको च्यापमा हेर्दाहेर्दै (भिडियो)
काठमाडौ । युवाहरुलाई जोखिम लिने निकै शौख हुन्छ । तर त्यही चाहनाले कहिले काँही अ//प्ठेरो पार्छ । एक जना युवा ढुँगाको गुफामा पस्दा दुई दिन सम्म त्यही अ//ड्कि//एका छन् ।
भिडियोमा कमेन्ट गरेका एक जना स्थानियले यसवारे जानकारी दिएका छन् । कविन लुइटेलले कमेन्टमा लेखे अनुसार बिब्ल्याटे नजिकै रहेको गुफा ढुंगा भन्ने स्थानमा पसेका ति युवालाई उद्दार गरिएको हो । गुफामा ढा/ड फ//सेपछि उनी बाहिर निस्कन सकेनन् । युवकको नाम सन्तवहादुर लिम्वू बताइएको छ । उनलाई नेपाली सेनाबाट निवृत्त टंक श्रेष्ठ, स्थानीय र नेपाल प्रहरीका जवानहरुले उ//द्धार गरेका हुन् ।
ढुंगामा फ//सेका उनी साथीहरुसंग बोलिरहेको सुनिन्थ्यो । प्रहरी र स्थानियले गुफा ख//नेर केही माटो निकालेपछि उनलाई बाहिर निकाल्न सकिएको थियो । वाहिर निस्किएका उनको अवस्था सामान्य देखिएको थियो । निकै ड//राएको जस्तो देखिएका उनी कापिरहेका थिए । स्थानिय र प्रहरीले उनलाई बोकेर अस्पताल तर्फ लगेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
यी अक्षरबाट नाम आउने पुरुषले पत्नीलाई रानी बनाएर राख्छन् ! तपाईको कुन ?
No Comments on यी अक्षरबाट नाम आउने पुरुषले पत्नीलाई रानी बनाएर राख्छन् ! तपाईको कुन ?
काठमाडौँ । हरेक युवतीको चाहना हुन्छ, आफ्नो पार्टनरले सबै आफूलाई आँखामा राखिराखोस्। त्यसैले त युवकलाई मन पराएसँगै उनीहरुको आनीबानी पनि बुझ्ने प्रयास गर्दछन्।
ए बाट नाम आउने पुरुष निकै मस्ती गर्ने खाले हुन्छन्। यस्ता व्यक्तिको सेन्स अफ ह्यूमर निकै राम्रो हुने गर्दछ। यस्ता पुरुषले आफ्नो पत्नीलाई निकै कुरा सिकाएर राख्ने गर्दछन्। यस्ता पुरुषलाई मानिसले जे सुकै भनेपछि असलमा यिनीहरु उत्कृष्ट पति हुने गर्दछन्।
No Comments on पाथिभरा माताले सबैको मनोकामना पुरा गरुन,बैशाख १६ गते बिहिबार, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
आज श्री शाके १९४३ बि.स.२०७८ साल बैशाख १६ गते बिहिबार इश्वी सन २०२१ अप्रिल २९ तारीख बैशाख कृष्णपक्ष तृतिया तिथी अनुराधा नक्षत्र वव योग वणिज करण चन्द्रमां बृश्चिक राशिमा आनन्दादि योगमा आनन्द योग राक्षसनाम संवत्सर सुर्य उत्तरायणं बसन्त ऋतु स्वामी शशिधरजन्मजयन्ती अन्तर्राष्ट्रिय नृत्य दिवस (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मिन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) मनोरञ्जनको निम्ति धेरै समय ब्यतित हुन सक्छ । सबारी साधन को प्रयोगमा ध्यान दिनु होला सामान्य झन्झट रहन सक्छ । अरुको बसमा गरीएको कार्यले मनमा खिन्नता उत्पन्न हुनेछ । लगानिको क्षेत्रमा सजग रहनु पर्ने दिन रहेको छ । कार्य सम्पादनमा ढीलाई हुनाले सामान्य अप्जस सहनु पर्ला
काठमाडौं उपत्यकामा कर्फ्यू : के–के खुल्छन्, के–केमा छ रोक ? [ सूचीसहित ]
No Comments on काठमाडौं उपत्यकामा कर्फ्यू : के–के खुल्छन्, के–केमा छ रोक ? [ सूचीसहित ]
काठमाडौ । राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लामा वैशाख १६ गतेदेखि २२ गतेसम्म निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ । यो अबधि कम्तिमा १५ दिनसम्म लम्बिनेछ ।काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका जिल्ला प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूद्वारा छुट्टाछुट्टै जारी आदेश अनुसार अत्यावश्यक बाहेकका सबै सेवा सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ ।
सरकारले सक्रिय संक्रमित पहाडमा २०० र तराईमा ५०० भएका जिल्लामा कम्तिमा १५ दिन कर्फ्यू जारी गर्न आदेश दिएको छ । सोही अनुसार जिल्ला प्रशासनहरुले यो आदेश जारी गर्नेछन् । निषेधाज्ञाको समयमा के–के खुल्छन् ? यो सबैको चासोको विषय हो । हामी यहाँ उक्त जानकारी प्रस्तुत गर्दैछौ ।
बैशाख १६ गतेदेखि एक सातासम्म निजी र सार्वजनिक सावरी दुवै चलाउन नपाइने पनि आदेशमा उल्लेख गरिएको छ । यस्तै सार्वजनिक एवं निजी सवारी साधनमा रोक लगाइनेछ भने अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका सवारी, बिरामी तथा कुरुवा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारी साधन बाहेक अन्यलाई काठमाडौं प्रवेशमा रोक लगाइनेछ ।
No Comments on मन्त्रिपरिषद्काे निर्णय : ७ दिन होइन १५ दिन निषेधाज्ञा
काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नियम, सवारीसाधन चलाउन नपाउने यी काम गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगायो प्रसासनले (बिज्ञप्ति सहित)
No Comments on काठमाडौं उपत्यकामा नयाँ नियम, सवारीसाधन चलाउन नपाउने यी काम गर्न पूर्ण रुपमा रोक लगायो प्रसासनले (बिज्ञप्ति सहित)
१६ गते बिहान ६ बजेदेखि २२ गते राति १२ बजेसम्म जिल्लाव्यापी ‘नि’षे’धा’ज्ञा’ के गर्न पाइने के नपाइने ?(आदेश सूचना सहित)
No Comments on १६ गते बिहान ६ बजेदेखि २२ गते राति १२ बजेसम्म जिल्लाव्यापी ‘नि’षे’धा’ज्ञा’ के गर्न पाइने के नपाइने ?(आदेश सूचना सहित)
काठमाण्डौ-जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले १६ गते बिहान ६ बजेदेखि २२ गते राति १२ बजेसम्म जिल्लाव्यापी ‘नि/षे/धा//ज्ञा’ जारी गरेको छ।
सं/क्रा/मक रोग ऐन २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ अनुसार काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालीप्रसाद रिजालले यस्तो आदेश जारी गरेका हुन्।
‘नि//षेधा//ज्ञा’ आदेश जारी गर्नुअघि सोमबार काठमाडौं, भक्तपर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छलफलमा बसेका थिए।
कोभिड-१९ को दोस्रो चरणको महामारी बढेपछि यो आदेश गर्नुपरेको रिजालले बताए। ‘यो आदेशको पालना गर्नु गराउनु सबै व्यक्ति, संघ, संस्था, पेशाकर्मी, व्यवसायी तथा आम नागरिकको क/र्त//व्य हुनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘आदेश उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार का//र//बाही हुने जानकारी गराइन्छ।’
यो आदेशसँगै अत्यावश्यक सेवाका लागि मात्र सवारीसाधन, पसल खुला गरिएको छ। सार्वजनिक एवम् निजी सवारीसाधन एक साताका लागि काठमाडौं जिल्लाभरि रो//क लगाइएको छ। भक्तपुर र ललितपुर जिल्लाले पनि सोही किसिमको आदेश जारी गरेका छन्।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले काठमाडौं प्रशासनले जारी गरेको आदेशलाई निरन्तरता दिएको जनायो।‘जिल्ला मात्रै फरक पर्‍यो अरू सबै एउटै छ, काठमाडौंले जारी गरेकै आदेश पूरै हो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले भने।ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढुण्डीप्रसाद निरौलाले पनि काठमाडौं प्रशासनको जस्तै आदेश जारी गरिएको बताए।
अत्यावश्यक रुपमा सवारीसाधन चलाउनेलाई पनि पास, परिचय पत्र चाहिने भएको छ। अत्यावश्यक सामग्री बोकेका ढुवानीका साधन, बि//रा//मी तथा कु//रु//वा बोकेका एम्बुलेन्स, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्नेबाहेक अन्य सवारीसाधन जिल्लाभित्र प्रवेशमा रोक लगाइने छ। एम्बुलेन्स, खानेपानी, स्वास्थ्य, खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, दुध तथा दुग्धजन्य पदार्थ, बैंक, वित्तीय संस्था, दुरसञ्चार, इन्टरनेट, क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, फोहोरमैला लगायतका ढुवानी तथा यातायातका साधन विषय उल्लेख गरेर मात्र सञ्चालन गर्न पाइने रिजालले बताए।
सरकारी कार्यालय लगायतका सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागबाट जारी भएको पास लिएर सवारी चलाउन पाइने निर्णयमा उल्लेख छ। विकास निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने जनशक्ति र सामग्री ढुवानीका साधनको हकमा सम्बन्धित आयोजना वा कार्यालय प्रमुखको सिफारिसको आधारमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जारी गरेको सवारी पास लिएर सञ्चालन गर्न पाइने छ।
अन्तर्राष्ट्रिय उडानबाट विदेश जाने यात्रुको हवाई टिकट, पासपोर्ट, भिसा हुनेहरूलाई सिधै एयरपोर्ट जाने सवारीसाधनको व्यवस्था गरिने निर्णयमा उल्लेख छ। अस्पताल आउने जाने बिरामी र कुरुवा, मृ///त्यु सं////स्का//रमा अनिवार्य रुपमा सहभागी हुनुपर्ने भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी हुने अनुमति पास लिनुपर्ने छ। यसैगरी, खाद्य सामग्री र औषधी, स्वास्थ्य सामग्री पसलबाहेकका अन्य पसल हाललाई बन्द गरिने छ। खाद्य सामग्रीका पसल बिहान १० बजेसम्म र बेलुका ५ बजेदेखि ७ बजेसम्म खुला गरिने छ। डिपार्टमेन्ट स्टोरको हकमा ग्रोसरी कक्षमात्र बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म सञ्चालन गरिने छ।
खाद्य सामग्री, ग्रोसरी पसल, औ//ष//ध पसलजस्ता अत्यावश्यक सेवाका व्यवसाय सञ्चालन गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने छ।
पत्रकारको हकमा सूचना विभागले जारी गरेको परिचयपत्र चाहिने छ। काठमाडौं उपत्यका प्रवेश गर्ने व्यक्तिले स्थानीय तहले तोकेको क्वारेन्टाइन होम आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने छ। सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, स्विमिङ पुल, सपिङ मल, मनोरञ्जन स्थल, सैलुन, ब्युटी पार्लर, जिमखाना, पुस्तकालय लगायत सञ्चालन बन्द गरिएको छ। विवाह तथा ब्रतबन्धको हकमा बढीङ्गा १५ जना सहभागी हुन पाउने छन्। तर, त्यसमा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना गर्नुपर्ने छ।
नि///षेधा//ज्ञा आदेश जारी गर्नुअघि सोमबार काठमाडौं, भक्तपर र ललितपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू छलफलमा बसेका थिए।कोभिड-१९ को दोस्रो चरणको महामारी बढेपछि यो निर्णय गर्नुपरेको काठमाडौंका सिडि‌ओ रिजालले बताए। ‘यो आदेशको पालना गर्नु गराउनु सबै व्यक्ति, संघ, संस्था, पेशाकर्मी, व्यवसायी तथा आम नागरिकको क//र्त///व्य हुनेछ,’ निर्णयमा भनिएको छ, ‘आदेश उल्लंघन गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार का//र//बा//ही हुने जानकारी गराइन्छ।’